दैब पनि कति निस्टुरी ! आशीर्वाद थाप्न स्वर्गद्वारी हिँडेका उनीहरूले अब कहिल्यै भगवानसँग आशीर्वाद माग्ने छैनन् ! - समृद्ध नेपाल
नयाँ वर्षमा भगवानसँग आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि आशीर्वाद थाप्न स्वर्गद्वारी हिँडेका उनीहरूले अब कहिल्यै भगवानसँग आशीर्वाद माग्ने छैनन् !नयाँ वर्षमा भगवानसँग आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि आशीर्वाद थाप्न स्वर्गद्वारी हिँडेका उनीहरूले अब कहिल्यै भगवानसँग आशीर्वाद माग्ने छैनन् !गुल्मी भाका भूल दया क्षमा र ममत सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो
आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्योमाथिका यी हरफ स्वर्गीय कवि लेखनाथ पौडेलले काल महिमा नामक कवितामा लेख्नुभएको मानव जीवनको तितो यथार्थताको प्रतिबिम्ब हो । उर्बर जीवनको गोरेटोमा लम्कँदै जाँदा विभिन्न आरोह र अवरोहलाई चिर्दै र सुनौलो भविष्यको रेखा कोर्दै गर्दा दैवले यसरी बीच बाटोबाटै कलकलाउँदा मुनाहरूलाई टपक्क टिपेर लैजाला
भनेर र कसले पो कल्पना गरेको थियो र ! तर दैवको अगाडि कसैको केही लाग्दो रहेनछ भन्ने तितो यथार्थलाई गुल्मेलीले बुधवार नचाहाँदा नचाहँदै स्वीकार्न बाध्य हुनुपर्यो ।नयाँ वर्षमा तिनै भगवानसँग आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि आशीर्वाद थाप्न स्वर्गद्वारी हिँडेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका कर्मचारी चढेको जीप मन्दिर नजिकै पुग्दा दुर्घटनामा पर्‍याे ।
स्वर्गद्वारीमा भगवानको आशीर्वाद थाप्न नपाउँदै जीपमा चढेकामध्येका पाँच जना सधैँका लागि बीच बाटोबाटै कहिल्यै कसैसँग भेट नहुने गरी अलप बनेर गए । अब तिनीहरुले कहिल्यै भगवानलाई आर्शीवाद देऊ भनेर सताउने छैनन् ?गुल्मीले बुधवार चार जना राष्ट्रसेवकलाई गुमाएपछि अहिले सिङ्गो जिल्ला शोकमा डुबेको छ । जीप दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएकाहरुको शव बिहीवार दिउँसो
गुल्मी आइपुगेको थियो । ती शव जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखियो । श्रद्धाञ्जली दिनका लागि मानिसहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । कार्यालय परिसरमा क्रमैसँग राखिएका शव र ती शवमाथि राखिएका मृतकका सुन्दर र हँसिला तस्बिरले त्यहाँ उपस्थित जो कसैलाई बोलाइरहेको र हाँसिरहेको जस्तो आभास गराएको थियो ।
यस्तै ताल हो भने दाइजो लिन पाउनु पर्छ ! यस्तो साली परे पछि भिडियो सहित
१ वर्षसंगै बस्दा धेरै पटक बच्चा फाल्न लगायो, मैले गर्भ तुह्याई रहे – आशा
ओलीले भारतीय च्यानललाइ पैसा तिरेर अन्तरबार्ता दिएको खुलासा,सुरेन्द्र केसी जंगिए !
ट्विटरबाट हरप्रकारका राजनीतिक विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा के होला नेपाली नेताहरुको ?
बेलायतको स्थानीय राजनीतिमा नेपालीको सकृयता बढ्दो !
होम आइसोलेसनमा सास फेर्न गाह्रो भए डा.रबिन्द्र पाण्डेका यी १६ सुझाव पढ्नुहोस् !
श्रीमानले अर्की विबाह गरेपछि चटपटे बेचेरै छोरी र आफ्नो ज्यान पल्दै आएकी नबिनाको यती मिठो आवाज !
उदयपुरमा चट्याङले घर जल्यो !
छोरा छाडेर श्रीमान् लापत्ता,श्रीमती रुदारुदै बेहोसजिउदो ( भिडियो सहित )